ခင်မင်းဇော်: July 2007
ကျမတို့အတွက် ရ နှစ်ကျော် ကာလကို အားတင်းဖြတ်ကျော်ရင်း ကျမထောင်က လွတ်မြောက် လာခဲ့ပါတယ်။ လွတ်မဲ့ရက်ကို ကြိုမသိပဲ လွတ်ခဲ့တဲ့ ကျမက အမေ့ဆီကို ကြိုအကြောင်း မကြားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နေ့လည်လွတ်တာမို့ ကျမထက် အရင်စောလွတ်သွားတဲ့ မြို့ခံထောင်ကျဖက် သူငယ်ချင်းအိမ်တွေ ခဏသွားရင်း နောက်တနေ့မှာ ကျမတို့ မြို့လေးဆီကို ရထားစီးလို့ ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘူတာကနေ ကျမတို့အိမ်ကို အပြန်လမ်းတလျှောက်မှာ သိတဲ့လူတွေလဲ သိသလို နှုတ်ဆက်၊ မသိတဲ့ လူတွေကိုလဲ မသိသလိုကြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်ခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ ရပ်ကွက်ထဲ ရောက်တော့ အိမ်ပုံစံတွေက အရင်နဲ့ မတူ၊ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်နေသလို ခံစားရတဲ့ အပြင် ကျမတို့ အိမ်ဝင်းနား ရောက်ခါနီးမှာတော့ ထူးခြားချက်ကို ကျမ သိလိုက်ရ ပါပြီ။ ကျမတို့ ရပ်ကွက် မီးလောင်ခံထားရပြီလို့ ။ စိတ်ထဲကပူပူပင်ပင်နဲ့ အိမ်ဖက်ဆီ အမြန် လျှောက်လာတော့ ကျမတို့ ခြံဝန်းထဲမှာ အိမ်မည်ကာရှိတဲ့ အိမ်လေးတလုံးကို တွေ့လိုက်ရပါ တယ်။ အိမ်ရှေ့မှာ အမေက ခြံဝန်းလေးကို အမှိုက်လှဲနေတယ်ထင် ရပါတယ်။ ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနဲ့ လုပ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
အမေလို့ ကျမခေါ်သံကြားလိုက်တော့ လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ အမေ့မျက်လုံးတွေ ကတော့ တောက်ပ ရွှန်းစိုသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မီးလောင်လိုက်တာ တရပ်ကွက်လုံး ပြာဖြစ်သွား တာပဲ သမီးရေ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်ကပေါ့။ သမီးကို ပြောရင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မှာစိုးလို့ မပြောဖြစ်ခဲ့တာလေ… တဲ့။ ကျမတို့ခြံနဲ့ ဆက်နေတဲ့ ခြံက အမ၀မ်းကွဲတွေလဲ မီးလောင်တဲ့ အထဲ ပါသွားတဲ့ အပြင် အတွင်းပစ္စည်းတောင် မရလိုက်ဘူးတဲ့။ အမေကတော့ အတွင်းပစ္စည်း လေးတွေရအောင် ယူလိုက်နိုင်လို့ အခုလို ဒီနေရာလေးမှာပဲ ဆက်နေနိုင်တာပေါ့ သမီးရယ်လို့ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ပြောပြနေပါသေးတယ်။
အမေ ခုနက ဘာလုပ်နေတာလဲ ကြည့်လိုက်တော့ အုန်းလက်ကြွေတွေကို လိုက်ကောက် နေတာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဘာလုပ်ဖို့လဲ အမေဆိုတော့ အုန်းတံမြက်စည်း လုပ်မလို့လေတဲ့။ အော်….. ဆိုပြီး ကျမဘာမှ ဆက်မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။ အိမ်ထဲကို ၀င်လိုက်တော့ အုန်းတံမြက်စည်း လေးငါးခုကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဈေးထဲမှာ သွားသွင်းရောင်းတယ် သမီးရဲ့။ အမှိုက်ကလည်း ပိုက်ဆံရှာလို့ ရတယ်လေ လို့ အမေက ကျမကို ခပ်အေးအေး ပြောပြနေပါ တယ်။ ကျမတို့ ခြံနောက်ပိုင်းက အုန်းပင်တွေကတော့ မီးလောင်တာကို မသိသလို စိမ်းလန်း နေတာ တွေ့ရလို့ နည်းနည်း ၀မ်းသာမိပါသေးတယ်။ အဖေက သူ့အုန်းပင်တွေကို သိပ်နှစ်သက်တာ မဟုတ်လား။
အမေ အဖေ့သတင်းဘာကြားသေးလဲလို့ ထောင်ထဲမှာ မေးခွင့်မရတဲ့ မေးခွင့်မသာခဲ့တဲ့ မေးခွန်းကို ကျမမေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သမီးအဖေတော့ တောထဲမှာ အသက်ရှင်လျှက်ပဲလို့ ၉၄ ၊ ၉၅ လောက်က သတင်းရတယ်လေ။ သူလုပ်ချင်ရာကို လုပ်နေနိုင်တယ် ဆိုပဲ အမေ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ လူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမေတို့ ကုသိုလ်ကံပဲပေါ့ သမီးရယ်။ အခု သမီး ပြန်ရောက်လာတော့ အမေ ပိုတောင်ပျော်သေးတယ်။ အခုဆို မနက်ပိုင်းမှာ အမေ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းတယ် သမီးရဲ့။ ရောင်းကောင်းသား ၊ အမေနဲ့ သမီး စားဖို့တော့ လောက်ပါ တယ်။ အခုဒီခြံကိုတောင် သူများတွေ လာတောင်းဝယ်ကြတယ်။ ဘာလို့ ရောင်းရမှာလဲနော်။ ဒီမြေ ဒီခြံကို အမေတို့ချွေးနည်းစာနဲ့ သမီးအဖေ လုပ်အားတွေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဟာ။ အခုသမီး ပြန်လာသလိုပဲ သမီးအဖေပြန်လာရင်လဲ ဒီနေရာကိုပဲ သူပြန်လာမှာလေ ။ ဟုတ်တယ်မလား သမီးနဲ့ အမေ ဒီက စောင့်နေတာပေါ့နော်။
စကားအရှည်ကြီးကို မနားတမ်းပြောရင်း အမေက အဖေ့ကိုမျှော်နေကြောင်း သိစေလိုက်တယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျမတို့ အဲဒီနေ့က စကားတွေ ပြောလို့ မကုန်သလိုပဲ။ တခါမှ မသိဘူးတဲ့ တစိမ်းတွေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားတွေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုတွေ အကြောင်းအမေက စီကာပတ်ကုံး ပြောနေလေရဲ့။ ကျမလွတ်လာမှန်းသိလို့ လာတွေ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိသလို လာမတွေ့ရဲတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အိမ်နီးချင်းတချို့တွေကိုလည်း အမေက စိတ်မနာဖို့ စိတ်မကောင်းမဖြစ်ဖို့ ကျမကို တရားချနေသေးတယ်။
အမေက ကျမထင်ထားတာထက် လောကဓံကို ပိုပြီးခံနိုင်တယ် ဆိုတာကို ကျမ သိလိုက်ရ ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေကြားမှာ အမေဟာ ရုန်းကန်နိုင်တယ်။ နောက် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာတယ် ဆိုတာကို အဖေသိရင် ကျေနပ်နေမှာပါပဲ။
ကျမပြန်ရောက်ပြီး အမေနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေးမှာ အတူ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ကျမပါ ကူညီလိုက်တော့ အမေ့ဆိုင်လေးဟာ အင်မတန် လူကြိုက်များတဲ့ ရောင်းအားကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက် စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အမေ့ဘ၀လေးမှာ မထင်မှတ်ပဲ ကံကြမ္မာက အလစ်ဝင် တိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်။ အမေမှာ ရှိနေတဲ့ မကြာခဏ ဗိုက်အောင့် ရောဂါဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာတဲ့။ အမေကတော့ အပြုံးမပျက်ပါဘူး။ အမျိုးထဲက အမ၀မ်းကွဲတယောက်ကိုခေါ်လို့ ကျမဘ၀ကို (သူမရှိတဲ့ အချိန်မှာ) တယောက်တည်း အားမငယ်စေဖို့ စီမံပေးနေပြန်ပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေးကို အမ၀မ်းကွဲ အပျိုကြီးနဲ့ ကျမ ဆက်ထွက်ခဲ့ပြီး အမေ့ဆေးဖိုးကို ကြိုးစားရှာဖွေရပါတယ်။ အမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို ဆရာဝန်တွေက ၆ လလောက်လို့ ပြောပေမယ့် ကျမတို့ကတော့ တတ်နိုင်သလောက် ပြုစုကုသ ပေးချင်ဇောနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
အမေက အင်မတန် ခံရခက်တဲ့ ပူလောင်မှုတွေနဲ့ ကင်ဆာရောဂါကို တချက်မှ မငြီးငြူပဲ တရားနဲ့ရှုမှတ်ရင်း၊ သက်သာဖွယ်အဖြစ် ကျမတို့ တိုက်တဲ့ဆေးဝါးတွေကို သောက်သုံးရင်း သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်တွေကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကျော်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျမကတော့ ထောင်ကထွက်လာမှာ အမေ့ကို အရင်ထက်ပိုတွယ်တာလာသလို ပိုလို့နားလည်လာပါတယ်။ အမေဟာ စကားထဲမှာ အဖေ့အကြောင်းပြောခဲပေမယ့် နေ့တိုင်းမျှော်နေတယ် ဆိုတာကို သိသာစေတဲ့အချက်က အမြဲ ထမင်းပိုချက်တတ်တာ၊ အဖေကြိုက်တတ်တဲ့ ဟင်းတွေကို မကြာခဏချက်တာတွေက သိသာစေပါတယ်။ အမေနေမကောင်းတော့ ကျမထမင်းချက်ရင်လဲ အမေ့လို အမြဲပဲ ထမင်းပိုချက် ပေးတတ်ခဲ့ပါပြီ။
ကျမထောင်က လွတ်လာပြီး နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်မှာပဲ အမေ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို ဘာမှနားမလည်တဲ့ အမေက နိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးချင်တဲ့၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံချင်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ သမီးဖြစ်သူအတွက် သူတတ်နိုင်သလောက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားအပြင် သူ့မျှော်လင့်ချက်၊ သူ့ဘ၀တွေကို စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ရင်း ၊ သူခံစားချက်တွေကို မြိုသိပ် ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ အမေ့ စွန့်လွှတ်မှုတွေ အတွက် ဘယ်သူတွေ သိသိမသိသိ သမီးကတော့ ထာဝရ လေးစားနေဦးမှာပါအမေရယ်။ အမေ့လို အမေတွေ သမီးတို့ တိုင်းပြည်မှာ အများကြီးရှိနေဦးမယ့် ခေတ်ကြီးမဟုတ်လား အမေရယ်။ အမေ ကွယ်လွန်တော့ အမေ့ရဲ့ ခေါင်းအုံးအောက်က စာလေးတစောင်ကို ဖတ်ရပါတယ်။
နိုင်ငံရေးကို ဘာမှနားမလည်ပေမဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းအောင်လုပ်မဲ့ ယောက်ျား တယောက်ကို ပေးလှုခဲ့တယ်လို့ ကျမ သဘောထားပါတယ်။ ကျမတို့ ဒီဘ၀ ပြန်မဆုံ နိုင် တော့ဘူး ဆိုတာကို သိလိုက်ရတော့ ကျမ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာ နိုင်တော့မဲ့ သူကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ရိုးရိုးလေးနဲ့ ကျမအဖေကို နှုတ်ဆက်သွားကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါ ရေးထားခဲ့တဲ့ စာတစောင် ပါပဲ။ အဲဒီစာထဲမှာ မဆုံးနိုင်တဲ့ အသံမဲ့စကားတွေ၊ မပျောက်ပြယ်မဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပျော်ဝင်နေတယ်ဆိုတာ ကျမခံစားသိနေပါတယ် အမေ။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 8:20 PM6comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ရေး ကဗျာ ကျမဆီမှာ ၅ ပုဒ်ရှိတယ် လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ (၃) ပုဒ်ပဲရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခု ကျမက မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာကို တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများက ကွန်မန့်ထဲမှာ ဘာသာပြန်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ (ဘလော့လောကထဲမှာ အင်မတန်တော်တဲ့ ဘာသာပြန်နိုင်သူ၊ ကဗျာရေးနိုင်သူ၊ စာရေးနိုင်သူ ရွက်ပုန်းသီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။)
အကောင်းဆုံးပြန်ဆိုနိုင်သူကို အွန်လိုင်းထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မုန့်အမျိုးမျိုးကို အ၀ကျွေးမှာဖြစ်တဲ့အပြင် အန်တီ့ဓါတ်ပုံတွေကိုလည်း ချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကဗျာတွေကို လွတ်မြောက်နယ်မြေမှ စာရေးဆရာဂါမဏိ ဘာသာပြန်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကျမတင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ကဗျာတွေကို ဘာသာပြန်ချိန် ၃ ရက်ပေးပြီးရင် ဆရာဂါမဏိ ဘာသာပြန်ထားတာလေးကို တင်ပေးပါ့မယ်။ နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်။
နီးစပ်ရာဘလော့တွေကိုလည်း လက်တို့ သတင်းပေးလိုက်ပါဦးလို့။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 7:38 PM 12 comments:
ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့ ကိုယ့်တာဝန်ကို ကျေအောင်ထမ်းတဲ့ အနေနဲ့ ကျမကလည်း ကျောင်းသား လူငယ် နိုင်ငံရေးပါတီတခုဖြစ်တဲ့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၀င်လိုက်ပါတယ်။ အမေကတော့ အဖေကလည်း တောခိုသွား သမီးကလည်း ပါတီဝင်အဖြစ် စည်းရုံးရေးတွေ ဆင်းနဲ့ တော်တော် စိတ်ဆင်းရဲ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ အမေက ကျမကိုလည်း နိုင်ငံရေး မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ အဖေ့ကို တားမရသလို ကျမကို တားမရတဲ့အခါ အမေ့စကားသံတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း တိုးတိတ်လာသလို အမေ့တရားမှတ်ချိန် တွေလည်း တိုးတိုးလာနေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မစခင်အချိန်မှာပဲ ကျမကို ဖမ်းဆီးပါတော့တယ်။ ကျမတို့ကို တရားမ၀င် အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ်မှု ဆိုပြီး တရားစွဲခံရပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီပုဒ်မနဲ့ မတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ တရားမ၀င်အဖွဲ့ ဆိုတာကို ဘယ်မှာလဲလို့တောင် ကျမတို့က ပြန်မေးခဲ့ရတဲ့ မေးခွန်းကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ထောင်ချခဲ့တာပေါ့။
ကျမကို အမိန့်ချတဲ့နေ့ က အမေ့မျက်နှာကို ခုထိမျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်နေတုန်း။ သူ့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အနာဂါတ်တွေကို ပုံအောထားရတဲ့ တဦးတည်းသော သမီးကျမကို ထောင်ဒဏ်ရှစ်နှစ်လို့ တရားသူကြီးက ချမှတ်လိုက်သံအပြီးမှာ ဖျတ်ကနဲ လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ ကျမကို ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ အမေ့ရဲ့ အကြည့်။ သနားခြင်းနဲ့အတူ ဖြစ်ရလေဆိုတဲ့ အကြည့်ပါ။ ကျမတို့ အမှုတွဲက အယောက် ၂၀ လောက်ဆိုတော့ လာတဲ့မိဘ ညီအကို မောင်နှမကတင် အများကြီးပေါ့၊ အဲဒီအများကြီးထဲက ကျမအတွက် အားကိုးရာ နောက်ဆံတင်းစရာ အမေ ကတော့ တယောက်တည်း ထီးတည်းရပ်လို့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကို တွေ့ရတော့ ကျမရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်စွာ မျက်ရည်ကျမိပါတော့တယ်။ ကျမကို ချမှတ်ခံလိုက်ရ တဲ့ ထောင်ဒဏ် ရှစ်နှစ်ကြောင့် မဟုတ်ပဲ ကျမအတွက် အမေ စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရပြီ ဆိုတာကို အဲဒီအချိန်က ခံစားလိုက်ရလို့ပါ။
အဖေ့သတင်းလဲ မကြားရတဲ့အချိန်၊ သမီးဖြစ်သူကလည်း ထောင်နှစ်ရှည်ကျရပြီ ဆိုတော့ အမေ ဘယ်လိုတောင့်ခံမလဲလို့ ကျမ မတွေးတတ်ခဲ့ပါဘူး။ အမေက အင်မတန် ရိုးသား အေးဆေးပြီး ကြောက်တတ်သူလဲ ဖြစ်ပါသေးတယ်။
ကျမတို့ မြို့လေးကနေ ကျမဆီကို ထောင်ဝင်စာလာတွေ့ရတဲ့ အမေဟာ မနက်အစောကြီး ရထားစီး လာရပါတယ်။ ကျမကို နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှ တွေ့ခွင့်ရပြီး ညနေဖက် ဘူတာရုံမှာ ရထားစောင့်အိပ် ၊ မနက် ၄ နာရီ ရထားနဲ့ ပြန်တဲ့ အမေ့ကို ထောင်ထဲက မြို့ခံ ထောင်ကျဖက်တွေက ပင်ပန်းရင် မလာပါနဲ့ အမေ၊ ကျမတို့ ရိက္ခာထုပ်တွေနဲ့ မျှစားလို့ ရပါတယ် လို့ တောင်းပန်ပြောရင်း ၂ လ ၃ လမှ တခါလာတွေ့ဖို့ နားချကြပါတယ်။ တနှစ် အတွင်းမှာ အရမ်းအိုစာသွားတဲ့ အမေ့ကို ကြည့်ရင်း ကျမကတော့ ဘာမှ မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အမေ ဘာတွေ ဘယ်လို ရုန်းကန်နေမလဲလို့ တွေးကြည့်ရင်တောင် ရင်နာရပါတယ်။ အမေက စီးပွားရေးလည်း မလုပ်တတ်ဘူးလေ။
အဖေ့ကို ဒီအချိန်မှာ တမ်းတနေမလားလို့လည်း တွေးမိတဲ့ အချိန်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ အဖေရဲ့ သတင်းကလည်း လုံးဝကို မြုပ်နေပါတယ်။ အမေက ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့ရင် စကား သိပ်မပြောပါဘူး။ ကျမမေးတဲ့ အဆင်ပြေလားအမေဆိုရင် အင်းတခွန်းထဲ ပြန်ဖြေတာမျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ ကျမက ရပ်ကွက်ထဲက အကြောင်း ဆွေမျိုးတွေ အကြောင်း မေးရင်း စကားပြော နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေနဲ့ ကျမတိုင်ပင်မထားပဲ စောင့်စည်းမိတာကတော့ အဖေ့အကြောင်း မပြောမိအောင်ပါ၊ တကယ်လဲ ကျမတို့ သားအမိ ထောင်ဝင်စာ တလျှောက်လုံး အဖေ့ အကြောင်း တခါမှ မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
တကယ်တော့ အဖေ့ကို မုန်းသွားလို့ မေ့သွားလို့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ အမေရော၊ ကျမရော ရင်ထဲက သိပါတယ်။ ကျမတို့ သားအမိ အပြောချင်ဆုံး စကားတွေကလည်း အဖေနဲ့ ပတ်သက်ရာတွေပဲ ဆိုတာကို မပြောပဲနေလိုက်ခြင်းဖြင့် ပြောနေကြတာပါပဲလေ။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 3:57 PM No comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 4:01 PM 1 comment:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:25 AM No comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:56 PM 1 comment:
(ခါကာဘိုရာဇီ)မိုးကြိုး အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့ ၊ နောက် ကျမရဲ့ ဘလော့ မိတ်ဆွေကြီး ကိုမောင်ရင် တောင်းဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူတဦး နဲ့ သူမရဲ့ ဖခင်တို့ရဲ့ မေတ္တာဖွဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ရသစာစုလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ပါပုံလေးကတော့ ကျမတို့ ပုသိမ် အကျဉ်းထောင်ထဲက မိန်းမအကျဉ်းဆောင် ပုံပါ၊ ပုံထဲမှာ မြင်နေရတဲ့ မိန်းကလေး တွေကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေထဲက တချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံက (၁၉၉၀) ခုနှစ်က ခိုးရိုက်ထားတဲ့ ရှားပါးပုံလေးပါ။
မူပိုင် ခင်မင်းဇော် ဖြစ်ပါတယ်။
သမီး အငယ်ဆုံးလေး ၁၉၉၀ ခုနှစ်က အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ အချုပ် ၃ လ ရှိနေစဉ်တုန်းကတည်းက ကျုပ် သိပ်စိတ်ပူ နေခဲ့မိတယ်။ ဒီကလေးမက မခံချင်စိတ်သိပ်ကြီးတယ်။ မဟုတ်တာကို ဘယ်တော့မှ ငုံ့မခံတတ်ဘူး။ သူ့ကို ဘယ်လိုမှ ပြောရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိနေတော့ သူလုပ်ချင်တာကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း လုပ်နေနိုင်အောင်ပဲ အစွမ်းကုန် ကူညီနေမိတော့တယ်။ သူ့ သူငယ်ချင်း လေးတွေ အိမ်မှာလာတည်းရင် ကိုယ်က လက်ခံထားပြီး တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးနေရတယ်။ ကလေးတွေဆိုတော့ ဒီအစိုးရ ဘယ်လောက်ထိ ယုတ်မာမယ်။ ရက်စက်မယ် ဆိုတာကို မခန့်မှန်းတတ် သေးဘူး။ ကျုပ်ကတော့ ရေတပ်ထွက် စစ်သားတယောက် ဆိုတော့ သိနေတယ်။ စစ်တပ်ချင်း အတူတူ၊ စစ်သားချင်း အတူတူ။ တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းတာချင်း အတူတူ ကြည်းတပ်ကမှ ပိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ ခံယူထားတဲ့ သူတွေနဲ့ ဆက်မနေချင် တော့တာနဲ့ ကျုပ်တပ်ထဲက ထွက်ခဲ့တယ်။ တပ်ထွက် ဆိုတော့ ဘာလုပ်ရမယ် ဘာကိုင်ရမယ်လည်း သိပ်စဉ်းစားမရတာနဲ့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကားပစ္စည်း အဟောင်းလေးတွေကို မဂိုလမ်းရဲ့ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းမှာ ချရောင်း နေလိုက်တော့တယ်။ အဲဒီဝင် ငွေနဲ့ပဲ ကျုပ်သားသမီး သုံးယောက်ကို ကျွေးမွေးလာခဲ့တာပါ။
ကျုပ်မိန်းမအကြောင်း လာမမေးပါနဲ့ဗျာ။ အငယ်မ သုံးနှစ်သမီးကတည်းက အိမ်ထောင်ကွဲသွား ခဲ့တာ။ သူနဲ့ ကလေးတွေကို ထည့်လိုက်ရမှာ စိတ်မချတာနဲ့ ကလေးသုံးယောက်လုံး တာဝန်ယူခဲ့တာ ဒီနေ့ထိပါပဲ။ ကျုပ်လား နောက်မိန်းမ ထပ်ယူဖြစ်မှာ။ ကျူပ်ကလေးတွေ ကို မိထွေးဆိုတာ မတွေ့စေချင်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်ပြုစုပေးမယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလွဲလို့ ဘယ်သူနဲ့မှ စိတ်မချတာ ကျုပ်ကလေး တွေကို သိပ်ချစ်လို့ပေါ့ဗျာ။
အခုတော့ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရင် ရတဲ့ ပါတီကို အာဏာလွှဲပေးမယ်။ စစ်တပ်က စစ်တန်းလျားကို ပြန်မှာပါဆိုပြီး မပြန်တဲ့ အခါမှာတော့ ကျောင်းသား လူငယ် လေးတွေက ဘယ်ကျေနပ်ပါ့မလဲဗျာ။ ဂတိမတည်တဲ့သူ ဘယ်သူ့ကို မဆို မကျေနပ်ဘူးဆိုတာ ဖြစ်သင့်တာပါ။ စစ်တပ်က မျက်စိစပါးမွှေးစူးတဲ့ သူတော်တော်များများကို ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးကတည်းက ဖမ်းလိုက်တာ သောက်သောက်လဲ။ ကျုပ်သမီးလေးလဲ ပါသွားပါရောလား။
ပထမတခါက ၃ လပဲဖြစ်ပေမဲ့ နောက်တခါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ရတဲ့အခါ မှာ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြတယ်။ အဲဒီအခါမှာ တော့ သမီးသူငယ်ချင်းတွေရော သမီးရော ကျောင်းသားကလေး တွေ အများကြီးအဖမ်းခံရတာပေါ့။ စစ်ခုံရုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး စစ်ပြီး ချလိုက်တဲ့ ထောင်ဒဏ်က ကလေးတွေနဲ့ မမျှပါဘူး ဗျာ။ အနည်းဆုံးတောင်မှ ထောင်ဒဏ် ဆယ်နှစ်တဲ့။ ကျုပ်သမီး ထောင်ဒဏ် ဆယ်နှစ် အချခံလိုက်ရတာ ကြားရတော့ အဖေတယောက် အနေနဲ့ ထောင်ထဲမှာ နေရမဲ့ သမီးဘ၀လေးကို သနားလိုက်တာ။ သမီးတို့ ကလေးတွေ ကတော့ မျက်နှာတချက်မပျက်ဘူး၊ ခပ်တည်တည် ခပ်မာမာတွေနဲ့၊ ကျုပ်သမီးကဆို အဖေ ဘာမှမပူနဲ့နော်။ အထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ သမီးနေနိုင် တယ် တဲ့ ။ သူတို့ကငယ်သေးတော့ မိဘတွေရင်ထဲကို ဘယ်မြင်နိုင်ပါ့မလဲနော်။
ကျုပ်သမီးနဲ့ အတူတူ ထောင်ချခံရတဲ့ သမီးတယောက်ဆို အဖေမရှိဘူး။ သူ့အမေ ကလည်း နယ်မှာတဲ့။ သူ့ဦးလေးကပဲ သူ့ကို လာကြည့်တာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီသမီးလေးကို ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ၀မ်း နည်းတာ အားငယ်တာ မတွေ့ရဘူး။ ထောင်ဒဏ်ချပြီး ထောင်ထဲကို ပြန်ဝင်သွားတဲ့ ကလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အပြင်မှာ မိဘတွေက မျက်ရည်ကျရတယ်။ ကျုပ်သမီးလေး ထောင်ကျတုန်းက အသက် ၁၈ နှစ်ပဲ ရှိသေးတာ ကလား။ စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာ။ ကျုပ်ဖြင့် အဲဒီဆယ်နှစ် ဆိုတာကြီးကို ပြန်ပြီး ကြားယောင်ရင်း အိပ်မရခဲ့တာ အတော်ကြာတယ်။ ကျုပ်က ကျန်းမာရေးလည်း သိပ်မကောင်းတော့ ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ် စိတ်မချဖူးဗျာ။ သားကြီးနဲ့ သမီးလတ်ကလည်း အိမ်ထောင်ကျသွားတော့ ကျုပ်ကို သိပ်မကူနိုင်တော့ဘူး။ သူတို့လည်း သူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ မနည်း ရုန်းကန်နေရတာ မဟုတ်လား။ သားကြီးဆို နေဖို့အဆင်မပြေလို့ ကျုပ်အိမ်ပဲ ခေါ်တင်ထားတာ။
သမီးကို နှစ်ပတ်တခါ ထောင်ဝင်စာတွေ့နိုင်ဖို့ ကျုပ်ကြိုးစားရတယ်။ သူ့အတွက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ယူသွားချင်တယ်။ အထဲမှာ သူမျက်နှာမငယ် ရအောင်လေ။ အိမ်က သားက ထောင်ဝင်စာသွားဖို့ ၂၀၀၀ ထုတ်ပေးပေမဲ့ ဘယ်လောက်မှာလဲ။ သူကလည်း ဒါ့ထက်ပိုမပေးနိုင်ဘူး။ ကျုပ်ကလည်း တနေ့လုပ် တနေ့စားဖြစ်နေတော့ ခက်ခဲတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရတာပေါ့ဗျာ။ တနေ့ရောင်းရတဲ့ ငွေလေးထဲက ထန်းလျက်ထုပ်လေးဝယ် လိုက်၊ မြေပဲလေး ၀ယ်လိုက်နဲ့ တပတ် ထောင်ဝင်စာပြီး နောက်တပတ်အတွက် ထပ်ပြီးစုနဲ့ လုံးချာလိုက်နေတာပဲ။ သမီးထောင်ထဲမှာ ခြောက်နှစ်လောက် ရလာတော့ ဈေးရောင်းကလည်း ပါးလာတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း တက်လာလိုက်တာ ပြောမပြချင် လောက်အောင်ပါပဲ။
သမီးကိုတော့ ပြောပြမိသေးတယ်။ ဈေးရောင်း မကောင်းတော့ ထောင်ဝင်စာထုပ်က သေးသေးလာတယ် သမီးရယ်လို့၊ အဖေ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဖေရှိနေ သ၍တော့ ထောင်ဝင်စာထုပ် မပို့နိုင်ရင်တောင် လူကိုယ်တိုင်တော့ ရောက်အောင် လာမယ် သမီးရေလို့ပေါ့။ သမီးက စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်တယ် ပြောရမယ်။ ထောင်ဝင်စာ သိပ်မပေး နိုင်လည်း ရပါတယ် အဖေရယ်တဲ့ ၊၊ အထဲမှာ အားလုံး စုစားကြတာပဲ။ သမီးပုံစံထမင်းလည်း စားနိုင်ပါတယ်တဲ့ ၊၊ အဖေ လူပဲလာလည်း ရပါတယ်လို့ ရယ်ရယ်ပြုံးပြုံးပဲ ပြောပြသွားသေးသဗျာ။
သမီးထောင်ထဲမှာနေတာ (၇)နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ နောက်တခေါက် ထောင်ဝင်စာသွားဖို့ လေးရက်ပဲ လိုတော့တယ်ဗျာ။ သမီးလေးကို စိတ်ဓါတ် ခွန်အား သွားပေးနေတာပေါ့ဗျာ။ ဒီနေ့ ဈေးရောင်းကောင်း တယ်။ ကျုပ်ဆီက ကားပစ္စည်းဟောင်း တခုကို ဈေးသိပ်မဆစ်ပဲ ၀ယ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ သမီးဖို့ ၀က်အူချောင်းဝယ်ထားလိုက်တယ်။ သွားမယ့်နေ့မှ ကြော်ယူသွားမယ်။
နောက်သူငယ်ချင်း တယောက်ကို ပစ္စည်းတခု ၀ယ်ရောင်း လုပ်ဖို့ အကြံပေးထားတာ သူလုပ်လိုက်တာ မြတ်တယ်တဲ့။ ကျုပ်ကို ဂုဏ်ပြုဦးမယ်တဲ့ဗျာ။ ကျုပ်ကလည်း ငွေရင်းမရှိလို့ ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်လို့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းကို အကြံပေး ကြည့်တာပါ၊၊ သူမြတ်တယ် ဆိုတော့လည်း ကိုယ်လည်း ပြောပြရကျိုးနပ်တယ်ပေါ့။ ပျော်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ သူလိုက်ကျွေးတဲ့ဆိုင်မှာ စားလည်းစား သောက်လည်း သောက်လိုက်မိတယ်။ သောက်တာကတော့ တော်တော် များသွားတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ ခေါင်းတောင်မထူနိုင်ဘူး။ အိပ်ရာထဲကို တွဲပို့ခံလိုက်ရတယ်။
ဒီအပါတ်ထောင်ဝင်စာကို အဖေမလာဘူး။ တခါမှ မလာဘူးတဲ့ အမက လာတွေ့တယ်။ အဖေဘာလို့ မလာတာလည်း မေးတော့ ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်တဲ့။ သမီးကိုလည်း ဘာမှ မပြောခဲ့ဘူးအဖေရယ်။ အမကတော့ အဖေ မလာနိုင်လည်း အကိုနဲ့ အမ တယောက်တလှည့် လာမှာပေါ့လို့ ပြောသွားတယ်။ အဖေက သမီးကို သံယောဇဉ် ဖြတ်နိုင်သွားပြီပေါ့။ အဲဒီနေ့က ထောင်ဝင်စာ ထုပ် ထဲမှာ ၀က်အူချောင်းတွေပါတယ်။
သူများတွေကို အမေတွေက ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့ရင် ကျမလည်း အမေ့ကို လာတွေ့စေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေက ကျမတို့ အိမ်ထောင်စု စာရင်းထဲမှာ နာမည်မပါဘူးလေ။ ဒါ့ကြောင့် အမေက ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့လို့ မရတော့ဘူး။ အမေ့ကို သိပ်မခင်တွယ်မိပေမဲ့ အဖေမလာတဲ့ အခါတော့ အမေ လာစေချင်တာ အမှန်ပဲ။ အမနဲ့ အကိုကိုတော့ မပြောရဲဘူး။ သူတို့က စိတ်ဆိုး နေဦးမယ်။ အဖေကလည်း ဘာဖြစ်လို့ ဘုန်းကြီးဝတ်သွား တာလဲ မသိပါဘူး။ တကယ်ဆိုရင် ကျမ ထောင်ထဲမှာ ဇာထိုးပန်းထိုး လုပ်ရတော့ ထောင်ပိုင်ကြီးက ဆုမှတ်ရက်တွေ ပေးမှာတဲ့။ ထောင်အခေါ်ကတော့ အေကွာ၊ ဘီကွာ ပေါ့။ ကျမတို့ကို အေကွာပေးမယ်လို့ ထောာင်ပိုင်ကြီး ဦးတင်ဖေက ပြောထားတယ်။ အေကွာ သာရရင် ကျမ ဆယ်နှစ်က လျော့ရက် ၃ နှစ် နီးပါးရမှာ။ ကဲ ကျမထောင်က လွတ်မှ ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက် ပြီးရော။
ထောင်ထဲမှာနေသားကျသွားတော့လည်း သိပ်မခက်ခဲ တော့ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေက စုစုစည်းစည်း ရှိပြီး လူညီနေတော့ နေရတာ အဆင်ပြေပါ တယ်။ ကိုယ်နဲ့ ယုံကြည်ချက် တူသူတွေနဲ့ နေရတာမို့ အားငယ်စရာလည်း မရှိဘူးလေ။ တခါတရံ စိတ်အခန့်မသင့် တာလေးတွေ ရှိကြပေမဲ့ ထောင်အာဏာပိုင်နဲ့ တိုက်စရာ ရှိနေရင်တော့ အားလုံးက စိတ်ဓါတ်ညီပြီး တသံတည်း ထွက်တတ်တာမို့ စိတ်ညစ်စရာလည်း လုံးဝမရှိ။ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးသူတွေ၊ အတွေ့အကြုံစုံသူတွေ ဆီက ဗဟုသုတတွေ လေ့လာ ဆည်းပူးရင်းနဲ့ အချိန်က ကုန်မှန်းမသိ ကုန်သွားလိုက်တာ ၊ ကျမ ထောင်သက် (၇) နှစ်ကျော် လာတာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ဘာမှ မဟုတ်တော့ သလိုပါပဲ။ တယောက်နဲ့ တယောက် အားပေးရင်း၊ အပြင်က သိလာတဲ့ သတင်းလေးတွေ ဖလှယ်ရင်း မျှော်လိုက်ရတဲ့ လွှတ်တော် ဆိုတာလည်း ခဏခဏပါပဲ။ ရိုးရိုး အကျဥ်းသူတယောက်ဆိုရင် ရုံးချိန်းထွက်ပြီး ပြန်လာတိုင်း လွှတ်တော်အကြောင်း ပြောလွန်းလို့ ဒေါ်လွှတ်တော်လို့တောင် နာမည်တွင် သွားတော့တယ်။
ထောင်ထဲကို ရောက်ခါစက ကိုယ်မကောင်းတဲ့ မိန်းမထောင်ကျတွေနဲ့ ထားမယ်ဆိုတော့ လန့်သွားခဲ့တာ ကိုလည်း အခုပြန်ပြောပြကြရင်း ရယ်မောနေနိုင်ပြီ။ ကျမတို့ မိန်းမဆောင်နဲ့ ကပ်လျက်ရှိနေတဲ့ ဟိုဖက်ကအဆောင်က နိုင်ငံရေးမှု ယောက်ျားတွေ ထားတာတဲ့။ အဲဒီဖက်က ရိုက်တဲ့ အသံတွေကြားရင်တော့ ကျမတို့ဖက်ကလည်း ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူး။ တခုခုတော့ လိုက်လုပ်ရမှ။ နိုင်ငံရေးမှုချင်းမို့ သိသိ မသိသိ တအုပ်စုတည်းလို့ ကျမတို့တွေက ခံယူထားကြတာ မဟုတ်လား။ စစ်အစိုးရကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင် ကျမတို့နဲ့ ရန်သူတူနေတဲ့ ဘက်တဘက်တည်းလို့ ကျမတို့က ယုံကြည်ထားတယ်။ အမှုတွဲတွေကလည်း စုံမှစုံပဲ။ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ဒီချုပ်၊ ဗကသ၊ မကသ၊ ၁၇(၁)ဆိုတဲ့ တရားမ၀င် အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်မှု၊ ကျောင်းသား လူငယ်အများစုကတော့ ၅(ည)ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးမှု၊ ပုဒ်မ ၆၊ ၇ ဆိုတဲ့ တရားမ၀င်အသင်းဖွဲ့စည်းမှု၊ တရားမ၀င်စာစောင် ထုတ်ဝေမှု၊ ဘယ်လိုပုဒ်မတွေနဲ့ပဲ ၀င်လာလာ သီးသန့် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူတွေက တရောင်တည်း တသွေးတည်း၊ ဒါဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ အားသာချက် တွေပေါ့။
ကျမထောင်ထဲရောက်တော့ အခန်ကျဉ်းလေး ထဲမှာ ၈ ယောက်၊ ကျောင်းသူတွေချည်းပဲ။ ကျောင်းချင်း မတူလို့ မသိခဲ့ကြပေမဲ့ တခန်းထဲမှာ နေကြရတဲ့အခါ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း ပြောကြရင်းနဲ့ အပြင် ပြန်ရောက်ရင် ဘာတွေ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမယ်။ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ကြမယ်နဲ့ ပိုပြီးတော့တောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီး သွားကြသေးတယ်။ ကျမအတွက်တော့ တဘ၀စာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေကို ထောင်ထဲကနေ ရရှိခဲ့တယ်။ ဆယ်နှစ် ကျတာကို မေ့သွားလောက်အောင် ကျမတို့တွေက စိတ်တူကိုယ်တူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။
နောက်လေးလ လောက်ကြာတော့ ကျောင်းသူကျောင်းသား တော်တော်များများ ကို နှစ်အများကြီးကျထားတာကနေ ပုဒ်မ(၄၀၁)နဲ့ ပြန်လွှတ်လိုက် ပြန်ရော။ ကျမတယောက်ပဲ အခန်းထဲမှာ ကျန်ခဲ့တော့ လွတ်တော့မဲ့ သူတွေက သူတို့လွတ်တာကို မပျော်နိုင်ဖြစ်လို့၊၊ ထောင်ဗူးဝကို နောက်ပြန် လှည့်ကြည့်ရင် နောက်တခေါက် ထပ်လာရမယ် ဆိုတော့ မယုံဘူး။ လှည့်ကြည့်မှာပဲ ဆိုတဲ့ ကျမသူငယ်ချင်း တယောက်ကို ထောင်ထဲကနေ လှည့်ကြည့်ဖြစ်ရဲ့လားလို့ ကျမအဖေ ထောင်ဝင်စာ လာတုန်းကမေးတော့ လှည့်ကြည့်ရုံတင်ဘယ်ကမလဲ ထောင်ဝင်စာလာရတဲ့ နေ့တွေတိုင်း သူ ထောင်ဗူးဝမှာ ရှိနေတာတဲ့။ ထောင်ထဲက သူတွေသိချင်မယ့် သတင်းတွေကို သူက လာပေးနေမြဲပေါ့။
အဲလိုနဲ့ ကျမတို့စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်စွာ ဖြတ်ကျော်ခဲ့တာ ၈ နှစ်ကျော်တော့ လျှော့ရက်နဲ့ ထောင်က လွတ်ခဲ့တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အဖေ ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ ဆီသွားမယ်ဆိုတော့ အမက ငိုပြီးပြောပြတယ်။ အဖေဆုံးတာ တနှစ်ကျော် သွားခဲ့ပြီတဲ့။ အဖေ မလာနိုင်တာ လူ့လောကကြီးမှာ မရှိတော့ တာပါလားလို့ သိရတဲ့ အခိုက်မှာ ကျမမျက်ရည်မကျနိုင်ပဲ ဆို့သွားခဲ့တယ်။ အမရော အကိုရော အဖေဆုံးရတာ ကျမကြောင့်တဲ့။ အပြစ်တင် စကားတင်း ဆိုကြတာ သူတို့တင်မကဘူး။ အမျိုးတွေ အားလုံးပါပဲ။ ကျမကို သိပ်ချစ်ပြီး သိပ်မျှော်လင့်တဲ့ အဖေက ကျမအတွက် အမြဲပဲ စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေရတာတဲ့။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ပြောပြကြပါဦး လို့ မေးတော့ ကျမအတွက် ထောင်ဝင်စာ ထုတ် သေးမှာကို အဖေက စိတ်အမြဲ ပူနေရတာတဲ့။ ကျမထောင်က လွတ်လာခဲ့ရင် အနာဂတ် ပျောက်နေမှာ လည်း စိုးရိမ်နေသေးသတဲ့။ ကျမဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ ပါဘူး။
အဖေနေခဲ့တဲ့ အခန်းလေးမှာလည်း အကိုတို့ လင်မယားက ၀င်နေကြပြီ။ အဖေ့ သံသေတ္တာလေးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အဖေရေးလက်စ ဒိုင်ယာရီလေးကို တွေ့ရတယ် ။ အဖေဒိုင်ယာရီရေးတဲ့ အကျင့်မရှိတာ သိထားတော့ ဘာတွေများ ရေးခဲ့ပါလိမ့်လို့ ဖတ်ကြည့်မိတဲ့ အခါမှာတော့ ဖခင်တယောက်ရဲ့ မေတ္တာကို ကျမ သေသေချာချာ ခံစားမိလိုက် ရပါတော့တယ်။
အဖေ့ဒိုင်ယာရီထဲမှာ အဖေက ကျမကို ဖမ်းသွားတဲ့ နေ့ကစပြီး သူ့ခံစားချက်တွေကို အသေးစိတ် ရေးထားခဲ့တာပါလား။ ကျမအတွက် ထောင်ဝင်စာ နည်းမှာ အမြဲစိုးရိမ်တဲ့ အတွက် သူတနေ့ရတဲ့ ငွေထဲက နည်းနည်းချင်း ၀ယ်စုထားတဲ့ အစားအစာ တွေကို သူ့ရဲ့သား ကျမအကို ယူစားတာကို မကျေနပ်တဲ့အကြောင်း စိတ်ဆိုးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ကျမက အမေ့ကို တွေ့ချင်ရှာမှာပဲလို့ တွေးပြီးရေးထားတဲ့ သူ့ခံစားမှုတွေ အများကြီးပါပဲ။ စာကြောင်းတိုင်းဟာ ကျမကို စိတ်ထိခိုက် စေခဲ့ပါတယ်။ အဖေ့မေတ္တာကို ယုံကြည်ခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီလောက်အဖေ ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ တွေးထင် မထားခဲ့လို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဖေက ကျမရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်တွေ အတွက် သူအမြဲ ဂုဏ်ယူနေကြောင်းလဲ ရေးထားပါသေးတယ်။ အဖေ့ရဲ့ တချို့သော ဈေးဝယ်ဖောက်သည် ကားဝပ်ရှော့ တွေက အဖေ့သမီး နိုင်ငံရေးမှုနဲ့ ထောင်ကျနေတာ သိလို့ ပိုပြီး အားပေး ၀ယ်ယူခဲ့တယ် ဆိုတာလည်း အဖေက ထည့်ရေးထား ပါသေးတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ အဖေက သမီးအတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ် နေမှာပဲလို့ ကျမက မြင်ယောင်တွေးမိရင်း အဖေကြောက်ခဲ့တဲ့ အနာဂတ်ပျောက်တဲ့ သမီး ဘယ်တော့မှ မဖြစ်စေရဘူးလို့ ရင်ထဲက လေးလေးနက်နက် ဂတိပေးနေမိပါတော့တယ်။
(နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူဟောင်းတဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ခံစားရေးဖွဲ့ထားပါသည်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 2:48 PM4comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:07 PM3comments:
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ မှာ ကျမတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အုပ်စုက ပထမဆုံးအကြိမ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အဖြစ် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သလဲဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဒီလိုပါ။ အဲဒီ ၁၉၈၉ ခုနှစ် အာဇာနည်နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူထုနဲ့ အတူ အာဇာနည် ကုန်းကို ချီတက် အလေးပြုမယ်ဆိုပြီး ကျေညာထားခဲ့ပါတယ်။လူထုကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ အလွန် တက်ကြွစွာ စုရုံးနေပါပြီ။ စစ်အုပ်စုကလည်း အာဇာနည်နေ့မှာ လူအုပ်စုနဲ့ ချီတက် အလေးပြုခဲ့ရင် ပုဒ်မ၁၄၄ (လူငါးယောက်ထက်ပိုမစုရ) နဲ့ ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့ ကျေညာထားတဲ့အပြင် အဖမ်းမခံပဲ ဆက်လက်ချီတက်တဲ့သူ များလာရင် အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာ စစ်အင်အားကို တိုးချဲ့ ချထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ကလူကြီးတွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံရေးသမား ဟောင်းကြီး တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အစီအစဉ်ဖျက်လိုက်ဖို့ နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နောက်လိုက်ကောင်းတွေကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ မသေစေချင်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ တားဆီးပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံး အစီအစဉ်ကို ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ မနက်စောစောမှာ ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကျေညာလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီကျေညာချက်ကို မသိတဲ့ သူတွေ အများကြီးလလမ်းပေါ်ကို ရောက်လာကြပါသေး တယ်။ တချို့တွေလည်း ခေတ္တအဖမ်းခံရ၊ တချို့တွေလည်း အရင်ထဲက ဖမ်းချင်တာနဲ့ ရောပြီး ဖမ်းဆီးထောင်ချနဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ ၀န်းကျင်မှာ တော်တော် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အင်အားကို သိသွားတဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ သူမကို လွှတ်ထားရင်တော့ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး အမြန်ဆုံး အစည်းအဝေးထိုင်ပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း လိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမှီ ၊ ပါတီတွေ မဲဆွယ်ချိန် အဖြစ်ပေးချိန်တွေ ရောက်ဖို့ အများကြီးလိုပါသေးတယ်။ စစ်အုပ်စုရဲ့ အတွေးထဲမှာ တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းထိန်းထားလိုက်ရင် ကျန်တဲ့ သူတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကိုတော့ ငါတို့ နိုင်ပြီးသားလို့ တွက်ထားပုံရပါတယ်။
အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းကြောင်းတွေထဲက နိုင်ငံရေးကစားကွက်ရွှေ့ဖို့ ၊ သူတို့စွဲထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၀(ခ) နေအိမ်အကျယ်ချုပ်သက်တမ်း တနှစ်တကြိမ် သက်တမ်း တိုးခွင့်ကလည်း နောက်ဆုံး ငါးကြိမ်မြောက်ပြည့်သွားပြီးမို့ လွှတ်ကိုလွှတ်ရမယ့် ရက်ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် မတိုင်ခင်မှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပြီး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပြမယ် လို့ ကြွေးကြော်သံနဲ့ ၁၉၉၅ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ လူထုခေါင်းဆောင် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ပါတီရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပထမအကြိမ် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကနေ လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
လွှတ်ပေးခဲ့တာကလည်း ဇူလိုင်လ ဖြစ်နေလေတော့ ပြည်သူလူထုကြားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တော့ ဒီနှစ်အာဇာနည်နေ့ကို လာမှာပဲလို့ တယောက်စကား တယောက်နား ကနေ သတင်းစကား ပြန့်နေပါတော့တယ်။ ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်လာရင် သူနဲ့အတူ ပြည်သူလူထုတွေက အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို စုစုစည်းစည်း အလေးပြုချင်ကြတဲ့ ဆန္ဒကလည်း များနေတာမို့ အဲဒီ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ အာဇာနည်နေ့ဟာ တော်တော် လူများတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ရောက်နှင့်သူတွေကလည်း လာတော့မလားဆိုပြီး မပြန်ကြ ၊ နောက်ထပ် လူတွေက ရောက်လာနဲ့ လုံခြုံရေးအရ ရှာဖွေရေးလည်း မလုပ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ လူတွေက များမှများပါပဲ။
စစ်အုပ်စုရဲ့ အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုလည်း ကျမတို့ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတက်ရောက်ဖူးဆိုတော့ လူထုကလည်း အများကြီးမျှော်လင့်ကြတာပေါ့။ ကျမတို့လည်း လူထုထဲက လူတွေဆိုတော့ အဲဒီနေ့က ညနေထိဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ စောင့်ပြီး တနာရီတခါ အလေးပြုနေတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူအလေးပြုခဲ့ရတာလဲ အကြိမ်ကြိမ်လေ။
ပျားပန်းခတ်မျှ ဆိုသလို လူတွေ ပြည့်ကျပ်နေပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် အကြည့်တွေမှာလည်း တို့တွေ ဘက်တဘက်ထဲကနော်ဆိုတဲ့ တက်ကြွလေးစားတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ဆိုတာလည်း သိသာထင်ရှားစွာ မြင်မိခံစားမိနေကြပါသေးတယ်။
နယ်မြို့လေးမှာနေတဲ့ ကျမအဖို့ အာဇာနည်ကုန်းကို အာဇာနည်နေ့မှာ ရောက်ရှိပြီး ကိုယ့်လိုပဲ တကယ့်ကို ရင်ထဲကလေးစားနေကြတဲ့ ပြည်သူလူထု အစစ်အမှန်တွေနဲ့ အတူတကွ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဦးညွတ်အလေးပြုခဲ့ရတာလဲ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး တကြိမ်တည်းသော အတွေ့အကြုံအဖြစ် ဘ၀တသက်တာမှာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:36 PM2comments:
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ရေးဆောင်းပါး(၂ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ရေး ဆောင်းပါး ဖြစ်တဲ့ ဒီတပုဒ်မှာတော့ လူမသိ သူမသိ ပေးဆပ်ရဲသူတွေကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ရေးခဲ့တာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တယောက်ဖြစ်ဖို့ နောက်လိုက်ကောင်းတွေ လိုသလို ခေါင်းဆောင်ကောင်း ကလည်း အဲဒီ နောက်လိုက်ကောင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးတယ်ဆိုတာ အင်မတန် မင်္ဂလာရှိတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူအများစုကြီးကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု ၊ ဥာဏ်ပညာကြီးမား ထက်မြက်မှု နဲ့အတူ ကျမတို့ နိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ ဂုဏ်ယူဝင့်ထည်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ချစ်မြတ်နိုးစွာ လက်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ချစ်ခင်တဲ့ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်ကလည်း တဖန်ပြန်လည် ပြီးတော့ သူ့ကို လေးစားတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီအပေါ် တန်ဖိုးထားတတ်ပံ၊ု စည်းကမ်းရိုသေပုံ ၊သတ္တိရှိပုံ တွေကို တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို ပေးဆပ်ခြင်း လို့ အမည်တပ်ထားပါတယ်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 9:13 PM4comments:
ကျမသူငယ်ချင်းက သူ့ပါရမီဖြည့်ဖက်အတွက်ရေးတဲ့ ၀တ္ထုလေးကို တင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ရာကျော့်အတွက် ရေးပေးထားတဲ့ ရာကျော်တနေ့တာ လေးကို ပြန်တောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ ပူးတွဲ ဖတ်ရှုလိုက်ကြပါကုန်။
တကယ်တော့ ရာကျော်ဆိုတာ ကျမသူငယ်ချင်းအတွက် တကယ့်ကို မရှိမဖြစ်ဆိုတာကို သူ့တနေ့တာကို ဖတ်ကြည့်ရင်သိမှာပါ။ မေငြိမ်းပြောသလို သူ့ဘ၀မှာ အခြမ်းလွဲခဲ့စဉ်က သူဘယ်လောက် စိတ်ညစ်ရတယ်။ ဘယ်လို အခြေအနေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျမတို့က အသိဆုံးမို့ ကိုရာကျော်နဲ့ ဆုံဆည်းရတဲ့ ဘ၀မှာတော့ သူငယ်ချင်းကို ပျော်စေသူအဖြစ် တွေ့ရတဲ့အတွက် တကယ့်ကို မောင်နှမ အရင်းလို ခင်မင်ခဲ့ရပါတယ်။
တခါတလေ ရာကျော်နဲ့သူ သဘောကွဲလွဲတဲ့ အခါတွေမှာတောင် ကျမတို့ သူငယ်ချင်းတွေက ရာကျော်ဖက်မှာ ရပ်တည်တဲ့ သူတွေအဖြစ် ရောက်သွားအောင်ကို စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝတဲ့ သူပါ။ ရာကျော်ဆိုတာ သူကိုယ်ပိုင်ဘ၀၊ သူ့ အတ္တမာနတွေကို မေ့ထားပြီး (မေငြိမ်းနဲ့ တကွ သူ့မိသားစုအတွက် ဆိုတဲ့) ရထားတွဲကို လမ်းမှန်ရောက်အောင် ထိန်းကျောင်းနိုင်သူပါ။ လက်တအားဖွာတဲ့ ကျမ သူငယ်ချင်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သူ။ စိတ်မာတယ် ထင်ရပေမဲ့ တကယ် တမ်းကျ ထိခိုက်ခံစား လွယ်သူ ကျမသူငယ်ချင်းရဲ့ အရေးကိစ္စတိုင်းမှာ မတ်တည်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနေသူ။ ရေရှည်ကို ကြိုမြင်တတ်ပြီး အကြံကောင်းတွေ ပေးနိုင်သူ၊ ကျမသူငယ်ချင်း တွေဝေနေတတ်တဲ့ အခါတွေမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ရဲရဲရင့်ရင့် ချပေးနိုင်သူ…။ သူဟာ မေငြိမ်းအတွက် ဘုရားပေးတဲ့ဆု ဆိုတာဘယ်လောက်မှန်သလဲ သိစေချင်လို့ ကျမက မှတ်တမ်းတင် ပေးလိုက်ပါတယ်……….။
၀၆း၀၀ နာရီ
အား မနက် ၆ နာရီတောင် ရှိသွားပြီပဲ။ ဒီနေ့ တနင်္လာနေ့ ။
အင်းးးး ထမှ ထမှ ၊ ကလေးတွေ ကျောင်းရှိတယ်။
ဟင် အငယ်ကောင် စောင် ကွာ နေပါလား။ အအေးမိအုံးမယ်။
ကိုယ့်ဘေး က မမကတော့ အိပ်တုန်း။ ည တုန်းက ဘယ်နှစ်နာရီမှ အိပ်လဲမသိ။
ကလေးတွေကို သိပ်ရင်း ငါအိပ်ပျော်သွားတာတောင် ၁၂ နာရီလောက်ရှိပြီထင်တယ်။
၀ါး ………. ထမှ ထမှ
၀၆း၁၅ နာရီ
ထမင်းကြော်စားချင်တယ်လို့ မိန်းမ ကမနေ့က ပြောထားတယ်။
ဆိုင်ကြော်လေးနော် တဲ့။ ထမင်းကြမ်း ကျန်သေးရဲ့လားမသိ။
အော် နည်းနေပါလား။ ထမင်းအိုးလည်း တည်လိုက်ဦးမှ။
ကလေးတွေတော့ အိုဗာတင်းနဲ့ ပေါင်မုန့်ပဲ ကျွေးလိုက်တော့မယ်။
၀၆း၃၀ နာရီ
ညတုန်းက ဆော့ထားတာ ရှုပ်ပွနေတာပဲ။ တံမြက်စည်း လှည်းလိုက်ဦးမှ။
မိန်းမ အိပ်ရာကထလာရင် ရှုပ်နေတာတွေမြင်ပြီး စိတ်မကြည်ဖြစ်ဦးမယ်။
ပြီးရင် ကလေးတွေအတွက် အ၀တ်တွေ ထုတ်ထားအုံးမှ။
၀၇း၀၀ နာရီ
ထမင်းကြော်ဖို့ ဂေါ်ဖီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူနီလှီးထားမှ၊
ဟင် ရေခဲသေတ္တာထဲက ၀က်သားနည်းနည်းကျန်တာရော မတွေ့တော့ပါလား။
အော် ဒီမှာတွေ့ပြီ။ မိန်းမပဲ နေရာရွှေ့ထားတာဖြစ်မယ်။
နောက်… ကြက်ဥ ခလောက်ထားမှ။
၀၇း၃၀ နာရီ
ဒါမှ စားမှာ သောက်မှာနဲ့ ကျောင်းမီမယ်။
ကျဲကျဲ ။ အဲမွန် ထတော့ ထတော့ ၊ ဒီနေ့ ကျောင်းတက်ရတော့မယ်လေ၊
မျက်နှာသစ် ၊ သွားတိုက် ၊ အမြန်လုပ်လေ ငိုင်မနေနဲ့ ။
ပြီးရင်လာ ပေါင်မုန့်နဲ့ အိုဗာတင်းသောက်လိုက်.
ဘာ အိုဗာတင်းမသောက်ချင်ဘူး။ ငါစိတ်မရှည်ချင်တော့ဘူးနော်။ ဒါဆို ဘာသောက်မလဲ၊
အေး..နွားနို့လား။ ကဲ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အအေးပဲရှိတယ်နော်။ အဲဒါပဲသောက်မလား။
သွားယူလိုက်။ ပိုက်တွေ့လား ဟုတ်ပြီ .. ကဲ ပေါင်မုန့်လာစားနော်။
ထမင်းက ၁၁ နာရီမှ စားရတာ၊ ဗိုက်ဆာလိမ့်မယ်။
ကဲ……ပြီးရင် အ၀တ်လဲမယ် လာကြ။ ဒီနေ့ဘာဝတ်စုံလဲ..
အားကစား ၀တ်စုံလား.. ရိုးရာဝတ်စုံလား…
၀၈း၃၀ နာရီ
ကျောင်းသွားမယ် ။ ဖိနပ်စီးလိုက်တော့၊
နေဦး။ သော့ခတ်လိုက်ဦးမယ် ။ ကဲလာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်။
အငယ်ကောင် နောက်မှာ မထိုင်ရဘူးနော်၊ လာ ရှေ့ကတက်။
မမတော့ အိပ်ရာက မထသေးပါလား။
ထမင်းကြော်ထားလိုက်မယ်။ နိုးလာရင် စားလို့ရအောင်။
ဟော … ကွန်ပျူတာ ဖွင့်သံကြားရတယ်။
မျက်နှာမသစ်သေးဘူး၊ ဒီကွန်ပျူတာရှေ့ အရင်ရောက်တယ်။
ယောက်ျားကိုတောင် နှုတ်မဆက်ဘဲ ကွန်ပျူတာကိုသွားနှုတ်ဆက်နေတယ်။
စိတ်ထဲကပြောတာပါ။ ပါးစပ်က ပြောမိလို့ စိတ်ဆိုးပြီး ထမင်းကြော်မစားရင်
ကိုယ်တယောက်တည်း စားနေရဦးမယ် ဟဲဟဲ…
ဟေး အမေကြီးရေ မျက်နှာသစ်ပြီးပြီလား။
( ထမင်းကြော်လေးက ကောင်းလိုက်တာမောင်ရာ...
အိမ်မှာ ဒီလိုပဲ ခဏခဏ ကြော်စားကြမယ်နော့်)
သူ ဒီလိုပဲ ပြောမှာ သိပြီးသား၊
ဟေ့…ဒီနေ့ မိန်းမ ဟင်းချက်အလှည့်မဟုတ်လား။
ဒီနေ့ ဘာစားမှာလဲ …ပြော။
ကျနော်ပဲ ချက်လိုက်ပါ့မယ် အမရယ်။
ဒါဆို လျှော်မယ့် အ၀တ်တွေ ဆပ်ပြာစိမ်ပေးထား၊
ဟင်းချက်ပြီး စက်နဲ့ လျှော်လိုက်မယ်။
၁၂း၀၀ နာရီ
ထမင်းစားမယ်ဗျို့။ ဒီမှာ အားလုံးခူးခပ်ပြီးသား ရယ်ဒီပဲ။
ဒီမှာ အေးကုန်ပြီနော်၊ ထမင်းရော ဟင်းရော၊
ကဲ စားနှင့်ပြီ ဟေ့။
တနေ့နေ့ ဘလော့တကာလည်လိုက်။ ချက်တီးလုပ်လိုက်နဲ့
ထမင်းစားဖို့ ကို မနည်း ခေါ်နေရတယ်၊
၁၃း၀၀ နာရီ
ညက ဘယ်နှစ်နာရီမှ အိပ်လဲ။ အမ်… ၁ နာရီ။
ထူးပါပေ့.. ချက်ရွမ်း ၀င်တာ ဒီလောက်တောင်……. ။
အံမာ ဘာစာဖတ်တာ အကြောင်းပြနေလဲ..
ကိုယ့်မိန်းမအကြောင်း မသိရင် ခက်မယ်..ဟင်း………။
နေ့လည်တော့ တရေး အိပ်မှ ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။
ဒီနေ့အပြင် မသွားရဘူး မဟုတ်လား။
ဒါဆို မောင် စာရိုက်စရာတွေ ကိုင်တော့မယ်နော်။
ညည်း ဘလော့အတွက်ရော စာ ရိုက်စရာရှိသေးလား..။
၁၅း၃၀ နာရီ
အား.. ခါးတွေ ညောင်းလိုက်တာ.. မျက်စေ့တွေလဲ ညောင်းပြီ..
တနေ့ တနေ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖက်ပြီး စာရိုက်ရတာ။
သူ့လိုလဲ ဘလော့လုပ်တာတွေ ချက်ရွမ်းဝင်တာမျိုးလည်း မရှိတော့
၁၆း၀၀ နာရီ
ကလေးသွားကြိုလိုက်ဦးမယ်။ မိန်းမ ထမင်းအိုးတည်ထားပေးနော်။
၁၆း၃၀ နာရီ
ကလေးတွေ ကျောင်းဝတ်စုံ လဲထားတော့နော်။
ထမင်းစားတော့မလား။ မစားသေးရင် ဆော့မလို့လား။
အေး ရန်မဖြစ်ရဘူးနော်။ အကြီးမက ကာတွန်းကားကြည့်မလို့လား။
နေဦး ဘဘ ဖွင့်ပေးမယ်။ ဟဲ့ ကွန်ပျူတာ သွားမကိုင်နဲ့နော်။
ဟဲ့ ကလေးတွေ လုမနေနဲ့။
(သူ့အဖေရေ.. ကလေးတွေက ဆူလိုက်တာကွာ..
ဒီမှာ RFA အတွက် ရေးနေတယ်လေ။)
ကဲ မင်းတို့ အမေပြောနေပြီ။
လာ ဒီကိုလာ အဲဒီနား သွားမရှုပ်နဲ့လို့ ပြောနေတယ်လေ။
၁၇း၃၀
ရေချိုးမယ်။ အကြီးမ အရင်ချိုးတော့ ။ ပြီးရင် အငယ်ကောင် ချိုးမယ်နော်၊
ဘဘ ချိုးပေးမယ်၊ လာကြဟေ့၊
သမီး ဘာဝတ်မလဲ၊ ကြိုက်တာယူဝတ်လိုက်။
ပြီးရင် အပြင် သွားရမယ်၊ မေမေ ကိစ္စရှိတယ်တဲ့။
( ကလေးတွေ ခေါ်လို့မဖြစ်ဘူး မောင်ရ ။ အပြန်မိုးချုပ်မယ်။ )
( ပြန်ခါနီးရင် ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လေ။)
မနက်ဖြန် ကလေးတွေ ကျောင်းတက်ရမှာနော်။
ဒါဆို အခု ဘာနဲ့ သွားမလဲ၊
(ကလေးတွေ ထမင်းကျွေးပြီးရင် လိုက်ပို့လေ)
အော် …အေးအေး.. ဒါဆို ညစာ မစားတော့ဘူးပေါ့။
(ဟုတ်တယ်။ မောင် စားနှင့်လိုက်)
ဒါဆို မိန်းမပဲ ကလေး ထမင်းကျွေးပေး။
(အင်း ။ အင်း)
၁၈း၀၀ နာရီ
(ပြီးပြီလား ။ကလေးတွေ ထမင်းလာဆက်ကျွေးပေးဦးလေ။
အေး လာပြီ ခဏ ဒီမှာ ဟင်းအိုးဆေးနေလို့။
၁၈း၃၀ နာရီ
ကဲ သားတို့သမီးတို့ မေမေ့ကို လိုက်ပို့ကြမယ်ဟေ့..လာ ။
တက် သွားစို့။ အိမ်တံခါး သေချာ သော့ခတ်ရဲ့လား။
၂၀းး ၀၀ နာရီ
၂၂း၀၀ နာရီ
၂၃း၁၀ နာရီ
အင်း… အင်း ကလေးတွေ မအိပ်သေးဘူး။ အခု လာခေါ်မယ်။
၀၀း၃၀ နာရီ
ဟေ့ ………မိန်းမ စောစော အိပ်နော်၊ အိပ်ရေးပျက်တာ များနေပြီ။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:17 PM3comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 8:57 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ မျှော်မှန်းသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီသို့ မရောက်ရောက်အောင် ချီတက်ရာလမ်းတွင် သဲတပွင့်မျှသော်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်တာဝန် ကျေပွန်သော နိုင်ငံသားကောင်းများ ဖြစ်ကြရပါစေကုန်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 10:19 PM No comments:
Posted by ခင်မင်းဇော် at 12:52 PM2comments:
ထောင်ထဲက အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဝေမျှပါဦးလို့ တောင်းဆိုတဲ့ ညီမငယ် ကေသွယ်အတွက်
ဒေါင်းပျိုမေ ကလောင်နာမည်နဲ့ ခေတ်ပြိုင်မှာရေးခဲ့ဘူးတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတပုဒ် တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ တကယ်တော့ လူကိုမတိုက် မူကိုတိုက်ပါလို့ ပြောတဲ့သူတွေ အတွက် မူဆိုတာ လူက လုပ်တာပါလို့ ကျမက ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဘာမဟုတ်တဲ့ လူတွေကဖန်တီးတဲ့ မူတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ခေတ်စနစ်ကြီးထဲမှာ စတေးကြရတဲ့ အညတြတွေရဲ့ ဘ၀တွေ၊ မျှော်လင့် ချက်တွေကို ဘယ်သူတွေက စာနာဖေးမကြပါသလဲ။ လူမသိ သူမသိ ကြေကွဲကြရတဲ့ဘ၀တွေ၊ ဘာမှန်းမသိပဲနဲ့
စတေးလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်တွေမှာ အပြစ်မဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ ဆန္ဒတွေ၊ တွယ်တာမှုတွေ၊ နုပျိုမှုတွေ ၊ ဘယ်လိုမှ အစားထိုးမရတဲ့ အချိန်တွေ ……..
အားလုံးသော အရာတွေကို ဥပေက္ခာပြုလို့ ၊ ပြည်သူဆိုတာ ရင်ဝယ်သားလို စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာကို မသိကျိုးကျင်ပြုလို့ လက်တဆုပ်စာ လူတစုက ကိုယ့်အာဏာ၊ ကိုယ့်စည်းစိမ်တွေ တည်မြဲဖို့ တိုင်းပြည်ပိုင် သယံဇာတတွေနဲ့ ကြီးပွားနေချိန်မှာ ဒီလို လူတွေရှိပါသေးတယ် ဆိုတာကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးကို မှတ်တမ်းတင်လိုက်တာပါ၊
“မမလေး ၊ ဟို ပတ်လည်က ဗိုက်ကြီးသည် ဗိုက်နာလို့ တဲ့။”
ခင်မမတို့ အနားမှာ လာပြီး စကားပြောနေတဲ့ ၀ါဒါမကို တန်းစီးက သတင်းပို့နေသံ ဖြစ်ပါသည်။ ခင်မမ၊ တင်မာဦး၊ အေးအေးသင်း သုံးယောက်စလုံး မတိုင်ပင်ရပဲ မတ်တပ် ထရပ်မိကြသည်။ ၀ါဒါမက တန်းစီး ဒေါ်ကြည်အောင်ကို မိန်းမထောင်နဲ့ ယောက်ျားထောင် ခြားထားတဲ့ လေးတံခါး သွားခေါက်ပြီး သတင်းပို့ဖို့ အမိန့်ပေးတော့ ခင်မမက လူနာဆီထွက်သွားနှင့်ပြီ။
ဒီမိန်းမထောင်ထဲမှာ ခင်မမတို့လို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူ ၁၅ ယောက်ရှိနေသည်။ သီးသန့်လို့ ထောင်ပိုင် ထောင်မှုးတွေက နာမည်တပ်ခေါ်ပြီး သာမာန် ရာဇ၀တ်မှုနှင့် ကျသော အကျဉ်းသူများကို လုံးဝစကားသွားပြောခွင့် မပေးချေ။ ဒီလို နေရာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ အတူနေရပြီး စကားမပြောနဲ့ဆိုတော့ သူမတို့က မလိုက်နာခဲ့။ လစ်ရင်လစ်သလို ပြော ပြောနေ၍ ၀ါဒါမတွေက သိပ်မကြည်။ အခုလည်း ဗိုက်နာနေပြီဆိုတော့ ကလေးမွေးခါနီးပြီပေါ့ ဆိုပြီး သူတို့သီးသန့်ထဲက အသက်အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဒီချုပ်က ဒေါ်ရင်ရွှေကို ခေါ်ပြီး ကူညီရအောင် သွားပါတော့သည်။
ဗိုက်နာလို့အော်နေတဲ့ အကျဉ်းသူက တော်တော်ငယ်ပါသေးသည်။ တကယ်တော့ ဒီထောင်ထဲကို ၀င်ဖို့က သူမ မဟုတ်ပါ။ တာဝန်ကျေ စပါး မရောင်းနိုင်လို့ သူ့ယောက်ျားကို ဖမ်းဖို့အလာ သူ့ယောက်ျားက ထွက်ပြေးသွားလို့ သူ့ကို ခေတ္တ ဖမ်းထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယောက်ျားကလည်း သူ့မိန်းမ ဗိုက်ကြီးနဲ့၊ နေ့စေ့လစေ့နဲ့မို့ မဖမ်းလေတန်ဘူးလို့ တွက်ထားပြီး ထွက်ပြေးသွားတာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့ အခုခေတ်ကာလက မထင်မှတ်တာတွေကို မြင်ဖူးတွေ့ဖူးအောင်ကို ဖြစ်နေတဲ့ ကာလ၊ မဖြစ်နိုင်ဖူး ဆိုတာမရှိ ၊ မဖြစ်သေးတာသာ ရှိတဲ့ ကာလ။
အခုလည်း ထောင်ထဲမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ငယ်ငယ်တွေ တသုတ်ပြီး တသုတ် ၀င်လာမစဲ။ ဘာရာဇ၀တ်မှုမှ မကျူးလွန် ကြပါပဲနှင့် ထောင်ထဲသို့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိ အာဏာရ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရဲကြသူတွေမို့ သာမာန် အကျဉ်းသူတွေက လေးစားကြသည်။ သူတို့တွေက ခပ်ပျော်ပျော် ၊ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေက မာကျောကြသည်။ သူတို့ အချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ကြပြီး ဘာမဆို တသံတည်း ထွက်ကြသည်။ ထမင်းစားလည်းအတူတူ။ အခြား အကျဉ်းသူတွေ ထမင်းစားလျင် လိုက်ကြည့်တတ်ကြပြီး အသက်ကြီးကြီး ဟင်းမရှိသူဆိုလျင် ဟင်းတွေ လာပေးတတ်မြဲ။ အခုရောက်လာတာ မကြာသေးသည့် ဗိုက်ကြီးသည် ကောင်မလေးကို သူတို့တွေပဲ စောင့်ရှောက်ထားကြသည်။
ဗိုက်နာလို့ ညည်းနေတဲ့ ကောင်မလေးနားတွင် သီးသန့် အုပ်စုကို အားပေးလျက်တွေ့ရသည်။ ဒီနေ့ ကစနေနေ့ ဖြစ်နေသည်။ ဆရာဝန် ရှိမှာ မဟုတ်။ထို့ကြောင့် မိန်းမထောင်က မွေးတတ်သူနဲ့ပဲ မွေးပေးရတော့မည်။ ဆရာဝန် ရောက်မလာမှန်း သိရက်နှင့် ရောက်လာစေချင်စိတ်ကြောင့် မိန်းမထောင်တခုလုံး ထောင်တံခါးဝကို ခဏခဏ ကြည့်နေကြသည်။ ကလေးမွေးမည့် အမေကလည်း ဒီကလေးက သားဦးမို့ မညှစ်တတ်ပေ။ မိန်းမတွေ အုံလာလို့ တင်မာဦးက လူနည်းနည်း ရှင်းပေးပါဦးလို့ ပြောနေသံ ကြားရသည်။ ကလေးမွေးပြီးရင် ချက်ကြိုးဖြတ်ဖို့ ဓါးတောင်းနေသံနှင့် ဓါးကို မီးရှို့ဖို့ မီးခြစ်လိုက်ရှာ နေသံတွေကိုပါ တဆက်တည်း ကြားနေရသည်။
“ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူတွေ မီးခြစ်ကလေး ရှာပေးကြပါဦး” ဒါက အေးအေးသင်း အသံ ဖြစ်သည်။ မနေ့ကမှ ရှာဖွေရေးက ၀င်ထားတာဆိုတော့ မီးခြစ်နဲ့ဓါးက အလွယ်တကူ ရှာမတွေ့ ဖြစ်နေပုံရသည်။
“ဟဲ့ ဒီလိုလိုက်ရှာလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ချိုချိုဦး ဆီမှာ သွားတောင်းလိုက်၊ ဒီမှာ မွေးခါနီးနေပြီ”
ချိုချိုဦး ဆိုတာက ၀ါဒါမထဲမှာ အပေါက်အဆိုးဆုံး၊ ဒါပေမဲ့ သူက နိုင်လို့ရတဲ့သူ တွေကိုသာ ဟောက်စားလုပ်တတ်သူ။ သီးသန့် အုပ်စုကိုတော့ ကွယ်ရာမှာသာ အတင်းပြောရဲပြီး ရှေ့မှာတော့ သွားဖြဲပြနေတတ်သူ။ ချိုချိုဦး ဆီက ဓါးရပေမဲ့ မီးခြစ်က လုံးဝမရ ဖြစ်နေသည်။ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူတွေ ထမင်းစားပြီးချိန် မီးသွားညှိဖို့ ပေးထားတဲ့ တလုံးတည်းသော မီးခြစ်က ထောင်မှူးမဆီ ပါသွားသည်။ ကလေးမွေးမည့် ဗိုက်ကြီးသည်ကတော့ ညည်းညူနေဆဲ၊
“ဟဲ့ အေးသင်းရေ၊ ချက်ကြိုးချည်ဖို့ အပ်ချည်လုံး အဖြူယူခဲ့ပါအုံး၊၊ လေးငါးပင်ပူးပြီး ကြိုးကျစ်ထားပေးနော်။”
“အေး ဒီမှာ ငါလဲ သတိရပြီးလုပ်နေတာ ပြီးတော့မယ်၊၊ အန်တီဒေါ်ရင်ရွှေ ဘာလုပ်နေလဲ၊ အသံမကြားရပါလား၊၊”
“ဘုရားစာရွတ်နေတာထင်တယ်။ ဟဲ့ မဟုတ်သေးဘူးဟ၊ အင်္ဂုလိမာလသုတ်ကို နွယ်နွယ်နဲ့ သူနဲ့ ရွတ်နေတယ် ကလေးမွေးမဲ့ အနားမှာ ၊ နင်ဘာလုပ်နေလဲ၊ သွားပြီး ကူရွတ်ပါလား၊”
“ဟဲ့ ဟဲ့ ငါမှ မရတာ၊ နင်လဲမရဘူးမဟုတ်လား၊ ဒီပြင့် အလုပ်ပဲ ကူလုပ်ရအောင်၊ ဘာတွေလိုသေးလဲ ၊ စဉ်းစားပါဦးဟ”
“စဉ်းစား၊ စဉ်းစား၊ မရတော့ဖူးဟ၊ ငါတို့ ကလေးမွေးတဲ့ အနားသွားနေရအောင်၊ ”
ကလေးမွေးမည့် အနားတွင် လူတွေက ၀ိုင်းနေကြသည်။ လွယ်လွယ်နဲ့ မွေးနိုင်ပါ့မလား ၊ပူပန်သူတွေက ပူနေကြသည်။ ကလေးမမွေးဖူးတဲ့ သီးသန့် အပျိုမတွေက ရှေ့ဆုံးမှာ ဖြစ်နေလို့ ဒေါ်ရင်ရွှေက အော်ထုတ်နေသည်။
“သွားကြစမ်း ၊ နင်တို့ဘာမှ မလုပ်တတ်ပဲနဲ့ ၊ လာရှုပ်မနေနဲ့၊ ကလေးမွေးမဲ့ လူနာက နင်တို့ပျာနေတာ ကြည့်ပြီး ကြောက်သွားဦးမယ်။ ထမိန်အပိုတွေသာ များများသွားရှာထားကြ သွား၊၊”
တကယ်လိုအပ်မည့် ထမိန်တွေ မရှာရသေးသည့် သူတို့ခေါင်းတွေ ပုသွားကြသည်၊၊ ခင်မမက နော်အက်စတားထ၊ံ အေးအေးသင်းက တင်မာဦးထံ ပြေးသွားကြပြီး လုံချည်လိုက်ရှာနေပြန်သည်။
“လူတွေ ဘာလို့ဒီလောက် အုံနေကြတာလဲ၊ နင်တို့ အရာပါလို့လား၊ နင်တို့ မွေးပေးတတ်ရင် ဘာလို့ ဆရာဝန် ခေါ်ခိုင်းရသေးလဲ၊ ကိုယ့်ဖာသာ မွေးပေးကြပါလား၊ သေနာမတွေ၊ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ထားကြ၊ ညနေကျမှ ယင်ကောင်မပြည့်လို့ ငိုပြနေရင် ငါနဲ့တွေ့မယ်”
ဘီးလူးဆိုင်းနဲ့ အော်ဟစ် ၀င်လာသူက ထောင်မှူးမရဲ့ လက်စွဲ ၀ါဒါမ စပယ်မိုး ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရတာ ဆရာဝန်က လိုက်မလာပဲ သူ့ကိုပါ ဟောက်လိုက်ပုံ ရသည်။ ထောင်မှူးကြီးသမီးဖြစ်ပြီး ဦးအောင်ပြောတတ်သူ စကားကို ယုံလွယ်သူဖြစ်သည်။
ကလေးမွေးမည့်သူကတော့ နာကျင်စွာဖြင့် အော်သံထွက်လာနေဆဲ၊
“ညှစ်ချင်လာမှ ညှစ်နော်၊ တအားညှစ်နေရင် အားကုန်သွားအုံးမယ်”လက်ကို ကိုင်ပြီး အားပေးနေသူက ဖဲမှုဖြင့် ကျလာပြီး ၀မ်းဆွဲသည်လုပ်ဖူးသည့် ဒေါ်တင်တင်ဝင်းဆိုတဲ့ မိန်းမကြီးဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်လဲမလာ၊ ဆေးမှူးလဲ မလာဖြစ်နေတော့ သူ မွေးပေးမည် ဟု ဆ်ိုကာ လုပ်အားပေးနေသည်။ ညည်းညူသံက စိတ်လာကာ မိန်းမထောင်တခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေတော့သည်။
အ၈ုင်္လိမာလသုတ်ကို နွယ်နွယ် တယောက်ထဲ အသံကျယ်ကျယ် ရွတ်ဖတ်နေသံက ကျန်တဲ့ မိန်းမသားတွေ၏ စိတ်ကို ခံစားစေသည်။ ယောက်ျားဖောင်စီး မိန်းမ မီးနေဆိုသည့် စကားအတိုင်း အသက်နဲ့ရင်းပြီး မွေးနေသည့် မိန်းမတယောက်အတွက် ဘယ်လောက်ပဲ ကြမ်းတမ်းတဲ့ စိတ်မာတဲ့ မိန်းမဖြစ်ပါစေ၊ မိန်းမချင်း စာနာစိတ်က ပေါ်ပေါက်လာကြပြီ။ ဘာအထောက်အကူ၊ ဘာလွတ်လပ်ခွင့်မှ မရှိတဲ့ ဒီလို ထောင်ထဲမှာ မီးဖွားရတဲ့ ဒုက္ခကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတော့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေနှင့် ငြိမ်သက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးမွေးမည့် အမေကလည်း သားဦးကိုယ်ဝန်တဲ့၊ အင်မတန် အပေါက်ဆိုးတဲ့ ၀ါဒါမတွေတောင် ခပ်ငြိမ်ငြိမ်နှင့် ကြည့်နေကြသည်။
“အူဝဲ ၊အူဝဲ ”
ကလေးငိုသံကြားရပြီး ချက်ကြိုးတန်းလန်းနှင့် ကလေးကို ဒေါ်ရင်ရွှေက လက်ကမ်းယူပြီး ချက်ကြိုးဖြတ်၊ ကြိုးချည်ခြင်းကို ဆက်လုပ်နေသည်။ ကလေးအမေက အချင်းမကျသေးလို့တဲ့။ ဒေါ်တင်တင်ဝင်းက ကလေးအမေပါးစပ်ထဲကို သူ့ဆံပင်တွေ ထိုးထည့်နေသည်။ နောက်တော့ အချင်းကျသွားသည်။ ကလေးကလည်း အနှီးထုပ်ကလေးမှာ အူဝဲ အူဝဲ အော်ကောင်းဆဲ၊ အားလုံးလည်း အခုမှ သက်ပြင်းချနိုင်တော့သည်။
ခင်မမက ဘာဖြစ်လို့ ပါးစပ်ထဲကို ဆံပင်တွေ ထိုးထည့်တာလဲလို့ စပ်စပ်စုစု သွားမေးနေပြန်သည်။
ဒေါ်တင်တင်ဝင်းက “အော် ၊ ပါးစပ်ထဲကို ဆံပင်ထည့်လိုက်တော့ အော့ချင်သလို ဖြစ်သွားမယ်လေ၊ အဲဒီတော့ အားထည့် ညှစ်ပြီးသား ဖြစ်ပြီး အချင်းကျသွားတာပေါ့။ အချင်းမကျပဲ ကပ်နေရင် သေတတ်တယ်။ ကံကောင်းလို့ အချင်းကျသွားတာမို့ တော်သေးတယ်။ အဒေါ်က အဲဒါကို စိုးရိမ်သွားတာ၊ တော်ပါသေးရဲ့ ၊ ”
ကလေးက ပိန်ပိန်လေးမို့ အားရစရာမရှိ၊ ချစ်စရာလည်း မကောင်းဘူး ဟု နော်အက်စတားက တိုးတိုးလေး သူ့လူတွေကို ပြောနေသေးသည်။ ပိန်နေပြီး အရေခွံလေးတွေက ရှုံ့နေတာမို့ မျောက်ပေါက်စလေးနဲ့ တူတယ်နော်ဆိုကာ တင်မာဦးက ထောက်ခံနေတော့သည်။ သူတို့တွေက ကလေးဆိုရင် ၀၀လေး၊ နီတာရဲလေး ၊ ချစ်စရာလေးလို့ တွေးထင်ထားပေမဲ့ မွေးကာစ ကလေးလေးတွေက ၆ ပေါင် လောက်ဆိုရင် ဒီလိုပုံပဲ ဆိုတာ မသိကြခြင်းဖြစ်မည်။ ကလေးငိုသံကတော့ ဆူညံနေဆဲ၊
“ကလေးမမွေးဘူးတဲ့ အပျိုမတွေဆိုတော့ နင်တို့တွေ မိခင်မေတ္တာကို ဘယ်လိုမှ မခံစားတတ်သေးဘူး၊မိခင်ဆိုတာ ကိုယ်မွေးတဲ့ ကလေး လှလှ မလှလှ ချစ်လိုက်တာမှ တုန်နေတာပဲ၊ နင်တို့လို ချစ်စရာကောင်းမှ ချစ်တာမဟုတ်ဘူး။ နင်တို့ သူများကလေးကို ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ကိုယ်မွေးလာတဲ့ ကလေးလောက်တော့ ဘယ်တော့မှ မချစ်နိုင်ဘူး။ သားသမီး အရင်းလိုချစ်တယ်ဆိုတာ ၀တ္ထုထဲမှာပဲ ရှိလိမ့်မယ်။နင်တို့ ကလေးမွေးဖြစ်ရင် အန်တီပြောတာ ဟုတ်မဟုတ် သိလိမ့်မယ်၊၊”
ဒေါ်ရင်ရွှေက သူ့လူတွေကို ရှင်းပြနေသည်။ ကလေးမတွေကတော့ ငြိမ်သက်သွားပြီး ချစ်စရာ မကောင်းဘူးလို့ ပြောမိတဲ့ နော်အက်စတားက “ဟုတ်တယ်နော်၊ ငါတို့ ပြောတာ ကြားသွားရင် စိတ်ဆိုးသွားမှာပဲ၊ အားနာလိုက်တာ” ဟု ပြောသည်။
ဘာတွေပဲ ပြောပြော ခင်မမကတော့ ဆန်မှောင်ခိုမှုနဲ့ ထောင်ကျလာတဲ့ ဆန်ပွဲရုံ သဌေးမဆီက ရေနွေးတောင်းပြီး ကော်ဖီဖျော်နေသည်။ မီးနေသည်ကို သွားတိုက်မလို့၊ မုန့်လဲထုတ်ပေးကြပါဦး ဟု ရိက္ခာကိုင်သူ နွယ်နွယ့်ဆီက မုန့်တောင်းနေသံ ထွက်လာသည်။ ထောင်ထဲမှာ ငွေကို လမ်းခင်းနိုင်သူတွေက ရေနွေးဓါတ်ဘူးနှင့် ခြင်ထောင်နှင့် နေထိုင်သည်။ သူတို့ငွေသုံးထားတာကို ကိုယ်က လူမမာအတွက် အမြတ်ထုတ်သင့်တာပေါ့ ဆိုပြီး ခင်မမက သူမတို့ဖာသာ ချမှတ်ထားတဲ့ ရေနွေးမယူရ စည်းကမ်း ဖေါက်ဖျက်မှုကို ဖြေရှင်းနေသည်။ မီးနေသည်အတွက်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားမို့ ဘာအပြစ်တင်သံမှ ထွက်မလာချေ။
တညနေလုံး ကလေးအကြောင်း ၊ မိဘ မေတ္တာအကြောင်းတွေ ပြောဆိုကြရင်း ခါတိုင်းနေ့တွေထက် အချိန်ကုန်မြန်နေသလို ထင်ကြရသည်။ တန်းပိတ်တော့ ကလေးအမေကို ပတ်လည်မှာ အေးတယ်၊ အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်ရန် ထောင်မှုးမက နေရာ ရွှေ့ခိုင်းသည်။ ကုတင်ပေါ်မှာ ဆိုတော့ သွေးနုသားနုသမားအတွက် အနည်းငယ်တော်သွားသည်။ ကလေးလေးကြောင့် အမေ ကုတင် ပေါ် ရောက်သွားတာပေါ့ဆိုပြီး အကျိုးပေးမည့် ကလေးလို့ တင်မာဦးက ကင်ပွန်းတပ်နေသည်။ နွယ်နွယ်က ဘယ်လို အကျိုးပေးသလဲ ထောင်ထဲတောင်ရောက်လာပြီးမှ ဟု ချေပနေသေးသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကလေးက တချက်တချက် အသက်ရှုရပ်သွား သလိုပဲ ဟု ကလေးအမေက ပြောပြသည်။ ဒေါ်ရင်ရွှေက သွားကြည့်ပြီး “ကလေးက အတွင်းတက်တက်နေတာ ထင်တယ်၊ ထောင်မှူးမကို သတင်းပို့ပြီး ဆေးခန်းပြခွင့် တောင်း၊ ကဲလာလာ ငါပါ လိုက်ပြောပေးမယ်”
ထောင်မှူးမထံသွားပြတော့ အနှီးထုပ်ထဲက ကလေးကို တချက်လှမ်းကြည့်ပြီး လေးတံခါး သွားခေါက်ပြီး သတင်းပို့လိုက် ဟုအမိန့်ရလာသည်။ ချောချောမောမော အဆင်ပြေသွားလို့ ၀မ်းသာနေစဉ် ဆေးမှူးဝင်လာတာတွေ့ရပြီး ဆရာဝန်က ပါမလာ။ နော်အက်စတား မျက်နှာက ရှုံ့မဲ့သွားပြီး ဆေးမှူးက ဘာတတ်လို့လဲဆိုပြီး ပြောနေသဖြင့် ခင်မမက ပါးစပ်ကို လှမ်းပိတ်ပေးလိုက်သည်။ “မတော် အဲဒီဆေးမှူးပါ မလာလို့ ပိုဆိုးသွားမယ် ”ခင်မမရဲ့ တိုးတိုးကြိတ်ပြောသံကို အားလုံးက နားလည်စွာ ငြိမ်သွားသည် ။ နားကျပ်တခုပဲ ပါလာပြီး ဘာဆေးမှ ပါမလာသည့် ဆေးမှူးက ကလေးကို ကြည့်ပြီး “ဒီနေ့ ဆရာဝန်မလာဘူး၊ မနက်ဖြန် တနင်္လာ တန်းစီမှ ဆရာဝန်ကို တခါတည်း ပြလိုက်နော် ၊ ကျနော်တင်ပြပေးထားမယ် ”ဟု အလွန်ငြင်သာစွာ ပြောပြပြီး ပြန်သွားသည်။
တနင်္လာနေ့တန်းစီချိန်မှာ ထောင်မှုး၊ထောင်ပိုင်အာလုံးနှင့်အတူ ထောင်ဆရာဝန်က လှည့်လည်ကြည့်ရှုရသည်။ မိန်းမထောင်ရောက်တော့ မနက် ဂ နာရီ ခွဲနေပြီ။ ကလေးအကြောင်းကို ပြောပြပြီး ကလေးကို ဆရာဝန်က ကြည့်နေသည်။ ကလေးအမေက ကြောက်ပြီး မပြောရဲဖြစ်နေလို့ သဘောနည်းနည်းကောင်းတဲ့ ၀ါဒါမ သန်းသန်းမြင့်က ကလေးအမေရှေ့ ဆရာဝန် အရောက် ပြောလေဆိုပြီး အတင်းပြောခိုင်းရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်က ကလေးကိုကြည့်ပြီး “ဆေးပေးလိုက်မယ်။ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မရှိဘူး၊” ဟု ပြောနေချိန်မှာပင် ကလေးက အသက်ရှု ရပ်သွားလို့ ကလေးအမေက ငိုသည်။ ကလေးကို ဆရာဝန်က လှမ်းယူပြီး ဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက် ဆိုကာ ဘယ်ညာ ရှေ့နောက် လှုပ်ပြသွားသည်။ သူလှုပ်ပေးသွားတော့လည်း ကလေးက အသက် ပြန်ရှုနေပြန်သည်။
ဆရာဝန်ထွက်သွားတော့ သီးသန့် အကျဉ်းသူတွေ ကလေးနားရောက်သွားသည်။ သူတို့ နားမလည်နိုင်သော၊ သူတို့ မတွေ့ကြုံဖူးသော အဖြစ်အပျက်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင် ခဲ့ရတော့ ကလေးအမေနှင့်အတူ မျက်ရည်ဝိုင်းနေကြသည်။
“ငါတို့လည်း ဘာမှ မလုပ်တတ်တော့ဘူး၊ ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရတာ ဘယ်လိုမှ မနေတတ်တော့ဘူးဟာ၊ ကလေးကို ကလေးဆေးရုံကို ပို့ပေးသင့်တယ်လို့ ငါထင်တယ်။ ”
ခင်မမက သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောတော့ အေးအေးသင်းက “ ဆရာဝန်က မစိုးရိမ်ရပါဘူး ဆိုပြီး ပြောသွားတာပဲဟာ၊ နင်က ဘာစိုးရိမ်နေရတာလဲ။ ကလေးလေးတွေက အဲဒီလိုပဲထင်ပါတယ်၊ ”
“ငါထင်တာတော့ ဓါးကို မီးမရှို့လို့ မေးခိုင်ပိုးဝင်သလားလို့”ခင်မမ၏ တွေးတွေးဆဆ အသံကိုကြားတော့ သူတို့ ဘာပြောရမယ်ဆိုတာ မသ်ိကြတော့။
“ဟုတ်ချင်လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ငါတို့ တတ်နိုင်သလောက် အမေကိုပဲ အားပေးကြရမှာပေါ့။ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပါ။ ၀မ်းထဲမှာ ကတည်းက ရောဂါပါလာတယ် ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ တွေးလိုက်ကြရအောင်။”တင်မာဦးက ဘာမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ အတူတူ တရားချပြနေသည်။
ကလေးက ခဏခဏ အသက်ရှုရပ်သွားတာ ညနေရောက်တော့ ပိုစိတ်လာသည်။ ဒေါ်ရင်ရွှေက လုံးဝမနေနိုင်တော့။ ထောင်မှူးမကို ကိုယ်တုိင်သွားပြောနေတော့သည်။ ထောင်မှူးမကိုယ်တိုင် ကလေးကို လာကြည့်ပြီး လေးတံခါးမှ တဆင့် ထောင်ဆေးရုံ ဖက်သို့ ကူးသွားလေသည်။ ၁၅ မိနစ်ခန့် အကြာတွင် ဆေးမှူးနှင့်အတူ ထောင်မှူးမ ပြန်ရောက်လာသည်။ ကလေးကို ဆေးရုံသို့ ထုတ်ပေးမယ်။ အမေပါ လိုက်သွားရမယ် ဟု ပြောတော့ အားလုံး ၀မ်းသာသွားသည်။ ကလေးအမေကို ပစ္စည်းတွေ ကူသိမ်းပေးပြီး မိန်းမထောင်လေးတံခါးထိပ်သို့ ညနေ ၄ နာရီလောက်မှာ လိုက်ပို့ကြသည်။ ကလေးကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသံတွေ ညံသွားသည်။ ဒေါ်ရင်ရွှေကတော့ မျက်နှာသိပ်မကောင်း၊၊ ခင်မမက ဒေါ်ရင်ရွှေကို မေးနေသည်။
“အန်တီ ကလေးက နေကောင်းသွားမှာပါနော်၊၊ ဆေးရုံမှာ ဆိုတော့ ဒီထောင်ထဲထက်တော့ တော်သေးတာပေါ့။”ခင်မမ စကားကို ထောက်ခံသူ ၊ ကန့်ကွက်သူ မရှိ အားလုံး ငြိမ်နေကြသည်။
ညနေ တန်းပိတ်ချိန်ပြီးတော့ ကလေးအမေကို လိုက်စောင့်ရသော ၀ါဒါမ ပြန်လာသည်။ သူကညဂျူတီ မဟုတ်သဖြင့် သူ့ပစ္စည်းတွေ လာယူပြီး ကလေးကို အောက်စီဂျင်ပေးထားကြောင်း ပြောပြသွားသည်။
ည( ၈) နာရီလောက်မှာ မိန်းမထောင် လေးတံခါးခေါက်သံ ကြားရသည်။ အဆောင်ထိပ်ဆုံးက အခန်းမှာ နေသော ခင်မမက အိပ်နေရာက ထကြည့်သည်။ ညဖက်ကြီး ရောက်လာသူဆိုတော့ နိုင်ငံရေးမှုပဲလား လို့ သူက တွေးသည်။ ဒါပေမဲ့ ၀ါဒါမနောက်က ၀င်လိုက်လာသူက ကလေးအမေ ဖြစ်နေသည်။ ညနေက သူနှင့်အတူ ပါသွားပြီး ဆေးရုံတက်တဲ့ ကလေးလေးကတော့ ဆုံးပါးခဲ့ရှာပြီ။ ငိုပြီး ၀င်လာတဲ့ ကလေးအမေကို ကြည့်ပြီး အားလုံး စိတ်မကောင်းစွာ တိတ်ဆိတ် သွားတော့သည်။
ကလေးလေးကို အသက်ရှင်စွာ လူ့လောကထဲရောက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့ ဘာမှ မသိသေးတဲ့ ကလေးလေး ဝေဒနာတွေ ခံစားပြီး ဆုံးပါးခဲ့ရပြီ။ ကလေးအမေကသည် သူဘာအပြစ်မှ မလုပ်ရပါပဲ ထောင်ထဲမှာ ရောက်ခဲ့၊ ကလေးတယောက်ကို အသက်နှင့်ရင်းပြီး မွေးဖွားခဲ့ ၊ ခုတော့ ဒီကလေးလေးကလည်း အသက်မရှင်သန်နိုင်ခဲ့။
ရေကြီးခဲ့လို့ ပျိုးပင်တွေ သေခဲ့တာအပြစ်လား။
တာဝန်ကျေစပါး ပေးအပ်ဖို့ ဘယ်မှာမှ စပါး မရှိတာအပြစ်လား။
စပါးဝယ် ပေးရအောင်ပိုက်ဆံ မရှိခဲ့တာ အပြစ်လား။
ရာသီဥတုကြောင့် ရေကြီးတာဆိုရင် ရာသီဥတုကိုပဲ အပြစ်ဆိုရမှာလား။
ကလေးကို ဆေးရုံမှာမွေးခွင့် မရခဲ့တာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ။ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်ဆိုရမှာလဲ ၊
ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ အုပ်ချုပ်ရမယ် ဆ်ိုတာကို နားမလည်တဲ့ နအဖကို ဒေါသသင့်ရင်း၊
ငိုနေတဲ့ ကလေးအမေကိုကြည့်ရင်း ခင်မမက နာနာကျည်းကျည်း မေးခွန်းတွေကို ရွတ်ဆိုနေခဲ့သည်။
တင်မာဦးကတော့ ဗမာပြည်မှာ လူဖြစ်ခဲ့ရတာကိုက မှားတာပါလို့ ပြောရမှာပဲ ဆိုပြီး ပေါက်ကွဲနေတော့သည်။
အဲဒီညက မိန်းမထောင်မှာ မျက်ရည်မိုးတွေ စွေခဲ့သည်။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 11:28 PM4comments: